Misangano muDurres - Via Hotels
Tine nzvimbo dzezviitiko zvako zvese!
Nakidzwa kwoushamwari kumahotera echokwadi eAlbania, Resorts, villas uye aparthotels.
Misangano Yemusangano muDurres
Kana iwe uchida kuita musangano wako kana musangano muAlbania Durres, saka waita sarudzo yakanaka. Nhoroondo yeiyo inotonhorera Durres inotenderera kumashure makore makumi matanhatu nemakumi mana, uko tsika uye zvemazuva ano tsika zvinosangana nenzira inofadza. Guta riri padyo nemapaki akanaka nepo richinakidzwa nenzvimbo inoyevedza yeguta.
Nzvimbo dzemusangano nemakamuri emisangano muDURRES
Nomuzvarirwo, isu tine akasiyana siyana enzvimbo dzemusangano uye makamuri emisangano muDurres zvinoita kuti zvive nyore kwauri kusangana. Isu tinopa makonferenti nemisangano yehukuru hwese kuti uri kufunga nezvekuvaka-timu zviitiko, kick-offs kana chiitiko chekambani. Isu tinokubatsira iwe kutsvaga nzvimbo yemusangano kuti musangano wako ubudirire.
Mahotera emusangano wedu muDurres
VH Belmondo Hotel sarudzo yakasarudzika yebhizimusi rako uye nzendo dzekunakidzwa muAlbania nekuda kwenzvimbo yedu yakanaka padyo nemahombekombe.Nechimiro chemazuva ano chemhando diki, Western Star Hotel ine makamuri akapamhama makumi matatu akagadzirirwa kunyaradza vashanyi vedu. Ese anoratidza yakakwira-mhanyisa Wi-Fi, yega mhepo inotonhorera uye yekugezera yega.
VH PRIME Villa Pascucci ndiyo yakasarudzika sarudzo kune rako bhizinesi uye mafaro emhando yepamusoro nzendo muAlbania nekuda kwenzvimbo yedu yakanaka padyo nemahombekombe. Nemhando yechizvino minimalist, PRIME Villa Pascucci ine makamuri akapamhama makumi mashanu akagadzirirwa kunyaradza vashanyi vedu. Ese anoratidza yakakwira-mhanyisa Wi-Fi, yega mhepo inotonhorera uye yekugezera yega.
VH Western Nyeredzi Durres
VH Western Star Hotel sarudzo yakasarudzika yebhizinesi rako uye nzendo dzinonakidza muAlbania nekuda kwenzvimbo yedu yakanaka padyo nemhenderekedzo. Nemhando yemazuva ano yemhando diki, Western Star Hotel ine makamuri akapamhama makumi matatu akagadzirirwa kunyaradza vashanyi vedu. Ese anoratidza yakakwira-mhanyisa Wi-Fi, yega mhepo inotonhorera uye yekugezera yega.
TYRANNE • ZVEMAZUVA • Saranda